Resy ambony latabatra | mandimby maharo
Resy ambony latabatra
Posted on 24 August 2013 by Mandimby Maharo
“Vero taingenam-pody, tsy folaka fa mandefitra” hono ny malagasy tamin’ity tetezamihitatra 4 taona ity. Mangina toy ny vatolampy, tsy mahetsika toy ny tendrombohitra, lehibe ihany ary mandondona saingy angeren’ny vorona. Tsy afa nanohitra satria ireo nantenaina hanirina no vaomaika nampivandravandra. Ireo hitsikitsika natao hivavahana no indrisy lasa papango nipaoka ny zanak’akoho.
Nosoloina ireo tao amin’ny CES voalohany fa hoe mitanila. Saingy teo amin’ny fisafidianana ireo mpikambana vaovao ao amin’ny CES faharoa dia efa sadasada ihany: ireo mpanao politika naano sonia ilay soridalana efa naha be resaka no lasa nanendry mpitsara. Ka na inona ho lazaina, na inona ho fianianana nataon’izy ireo dia mpanao politika izy ireo fa tsy mpitsara intsony. Ny antony nanolona ireo mpitsara teo aloha rahateo koa dia noho ny fandrahonana nataon’ny vahiny; noho izany dia tsy mpitsara malagasy intsony koa izy ireo fa vahiny.
Tonga tamin’ny tanjona nirina ary ireo mpanendry sy mpandrahona ireo: nofafana, nosakanana, nesorina, nodakana ireo kandida heverina fa manana ny lanja politika hahavaha izao olana izao. Ireo mpisolelaka sy mpanao kitapo latsaka sisa no indro fa aroso ho laniana. Tsiky sy haravona tsy omby tratra ny an’i Bemaintsy raha tonga namangy ireto mpanaraka baikon-tsaonegaly. Nahasahy nanao farateny fa tsy miraharaha izay tsy te hohaona aminy izy fa ny hanome baiko vaovao ireo kilongany no tena aton-diany. Ireto kilonga izay nidehaka koa fa miasa tsara ka namoaka ny vokatra dia ny datim-pifidianana vaovao.
Ilay fositra nahatonga izao rehetra izao koa moa tsy afa nanohitra intsony fa dia ny nanaiky tsy sazoka no nataony, na dia nampivadi-tsaina azy aza ny mieritreritra izany.
Resy tokoa ary ve ny malagasy ka handeha hihinana ny tsy teny nierana. Sa dia hionona amin’izay azo ihoriranana satria tsy misy izay tena mety ho fidina. Fifidianana ihany hono no vahaolana. Saingy raha toa ka ny vahaolana aza lasa olana, inona no fanantenana azo heverina amin’izany? Asa lahy fa “Toy ny kibobo tratry ny fandrika ity ny mpiray tanindrazana ka ny matoritory no ahazoan’aina.” Tsapa sy hita nefa fa maratra anaty ny tsirairay avy manoloana ity fivarotana an’i Madagasikara ambongadiny ity, saingy noho ny tsy fisin-ny mpitarika mahay dia tsy mahatohitra ny zava-manjo.
Tags: Cenit, Ces, fifidianana, Madagasikara, mdg2013Categories: Uncategorized